Brazil Iyo Mexico Oo Maryo Dhiigleh Kala Furtay Isna Mari Waayay
HomeWararka MaantaBrazil Iyo Mexico Oo Maryo Dhiigleh Kala Furtay Isna Mari Waayay
Ciyaartii ugu adkayd uguna xiisaha iyo xamaasada badnayd ayaa ku dhex martay garoonka Fortaleza labada xul ee sida weyn isu fahmayay isuna baqo galinayay ee Brazil iyo Mexico, taas oo nasiib darro qarankii Martida loo ahaa sacabka iyo sawaxanka ugu badana ay ku taageerayeen shacabka wadankiisa ee soo buux dhaafiyey garoonku aanay u suurtoobin inay kala dareeraan garoonka wax ka badan dhibic kaliya.
Xulka awooda badan ee Brazil iyo qaranka awoodiisa aan shakiga la gallin karin ee Mexico ayaa maryo dhiigleh ku kala furtay ciyaartoodii caawa ee Group -ka A oo ahayd kulankii labaad ee mid kastaa ciyaaro, kaas oo ku dhamaaday 0-0.
Labadan xul ayaan waxba isula hadhin , laakiin awoodi waayay inuu midna kan kale ka dhaliyo gool, waxaana amaanta ugu badan lahaa labada goolwade oo mid kastaa badbaadiyey kubado goolal loo fishay.
Ciyaartan oo aynu odhan karno waxay ahayd midii ugu adkayd ee intii ciyaaruhu socdeen , labada qaran mid kastaana hore u watay saddex dhibcood oo uu ka soo xoogsaday ciyaartii hore, ayaa dhinaca kale ahayd mid aan la qarin karin , sida ay labada xul mid kastaa kan kale qaab ciyaareedkiisa u fahmayay , labada tababarana isula eegayanayeen bedelka iyo qaab ciyaareedkaba , taas oo ay ugu wacnayd , iyagoo inta badan ku kulma tartanka koobka Laatiin america oo ay ka wada tirsan yihiin.
Inay isku awood ahaayeen labada ciyaaryahan ee labada xul , ayaa waxa muujinaysa , celceliska kubad haysashada oo aad isugu dhawayd, (Brazil 53 % – Mexico 47 % ).
Brazil, dhibicdan caawa iyo saddex dhibcood oo ay ka heshay Kulankii furitaanka ee ay 3-1 ka ku soo dhaaftay Croatia , 4 taas dhibcood ayay leedahay, halka Mexico , dhibicda caawa marka loogu geeyo saddexdii dhibcood ee ay ciyaarteedii hore ka soo qaadatay Camaroon , 4 taas ayay iyana sidoo kale leedahay waana isku dhibco.
Taas ayaa macneheedu noqonayaa in Maalinta berri ah ay noqon doonto tii aynu arki lahayn kooxdii ugu horeysay ee ka hadha koob aduunkan , ciyaarteedii labaadba, labada kooxood ee Camaroon iyo Croatia oo Midkii Laga Badiyaa toos uga hadhayo koobka aduunka…………..
Kaka: Ma doonayo inaan hormuud ka noqdo waaga cusub ee Brazil Laakiin …..
Zlatan Ibrahimovic: “Laacibkii ugu fiicnaa Ee aan arko waa Luiz Ronaldo”